राम्रो ‘म’ को महात्मय | samakalinsahitya.com
कपुरी ‘क’, भकारी ‘भ’ को त्यती गुणगान नगाए पनि राम्रो ‘म’ को प्रयोग भने नेपालमा अधिकतम रुपमा नै भइरहेको छ । खै भ लाई पुकार्दा भकारी बोक्नु पर्ला भनेर हो की ? अनि म राम्रो भएर नै म लाई जताततै सजाएको हो,एकछिन त अलमल मै परें । जे होस यो म भन्ने शब्दको प्रयोग नहुदो हो त आज नयाँ नेपालको गन्ध नै नपाउने थिए हुँ ला सायद । बालक देखी बृद्ध सम्म सबलाई मन पर्ने “म’ लाई हामीले मात्र कसरी नकार्ने त होईन त्यसैले ‘म’ लाई नै पुकार्दै यो गुणगान गाउन लागेको छु । हामी भन्दा पनि म र मलाई भन्ने थेगोले आज नेपाली शब्दकोषलाई नै चुनौती दिलाएको छ । मस्ट पपुलर र मस्ट रिपिटेडको सुची बनाउने हो भने ऋ र ज्ञ ले त स्थान नै नपाउने भै सक्यो । कसरी भन्नु होला फेरी,ऋषी र ज्ञानी बन्न लायक नेपाली को छन त ? यदि सबैले ज्ञानीको भाव ब्यक्त गरेका भए अहिले जस्तो बर्ष दिनमै पटक पटक सरकार फेर्नु प¥थ्यो त ?
लुइ चौधौले “म नै राज्य र राज्य नै म हुँ” भनेर प्रचार गर्दा जे परिणाम भोग्नु प¥यो आखिर नेपाली हालत पनि त्यो भन्दा कम नहोला जस्तो लाग्छ । किनभने यहाँ म को प्रचार हरेक क्षेत्र अर्थात “नुन देखी सुन” सम्म नै फैलीएको छ । अझ राजनीतिमा त झन म बिना केही पनि हुदैन । कतै ठुलो पदपुर्ती गर्नु प¥यौ कि मेरो मान्छे,कतै चोर,गुण्डा छुटाउनु परे पनि मेरै मान्छे अनि चिल्लो कुर्सी चुम्न त म भन्दा अरु योग्य नै छैन भन्ने भावना यत्रतत्र सर्वत्र छाईसकेको छ । “मै खाँऊ,मै लाऊँ मोजमस्ती मै गरुँ अरु सवै मरुँ” भनेर त्यसै भनेका हैन रहेछन् । गिरिजाबावुले सुजतालाई उपप्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसाउदा अनौपचारीक रुपमा विरोध भए पछि सूर्यको अगाडी चन्द्रमाको प्रकाश जस्तै विलाउन बाध्य भए । विजय कुमार गच्छेदारले आफ्नो गच्छे भन्दा बढी अरबौको पुल बनाउन तम्सिए । पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले त झन म को ठाडै स्विकार गर्दै भाइहरुको समेत भलाइ गरिदिनु भयो ।
यो त केही यसो उदाहरण मात्र हो । उता भारतले पनि म कै अनुसरण गरेर झन्डै झन्डै नेपाल मेरै हो भन्न लागि सक्या थे । आखिर गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेको भनेर ता¥यो । म को प्रयोगले केहीले राहत पाए पनि कोहीले भने नरकको दुःख भोग्न बाध्य छन् । मेरै श्रमती हो भन्दै भारतको कोठीमा पु¥याइएका नेपाली चेलीको वेदना पनि म भित्रको रामकहानी नै हो । अनि मेरै मान्छे भनेर बिश्वास गर्दा दलालीले सर्वस्व पचाइदिएको घटना पनि कम दुःख दायक पक्कै छैनन् । अनि आफ्नै मान्छे भनेर विश्वास गर्दा आफ्नो सर्वस्व सहित अर्कैको दुलही बनाएको घटना पनि सहि सक्नुको छैन ।
त्यसैले “म” शब्दको चमत्कारी उपयोग अझ भनौ बहुउपयोगले त नेपाली समाजमा निकै भुइचालो ल्याई सकेको छ । म बिना अब नेपालीहरु बाच्न पनि असर्मथ छन् । म को भरमा नै दैनिकी चल्ने हुनाले नै नेपालमा स्वार्थ र अस्थिरता जस्ता कुराहरुले आश्रय पाईरहेका छन । अनि एकअर्कामा दोषारोपन गर्दै अमूल्य समयको दुरुपयोग गरिराखेका छन् । यस परिवेशमा फाइदा पुग्ने भनेको त्यही म लाई नै हो अनि जो इमान्दार छ,जो सहयोगी र अर्काको हित चाहन्छ त्यसलाई यो समाजले कुल्चेको छ । अनि माथी उक्लिने भ¥याङको खुटकिलो फुटकाइदिएको छ र खुट्टा तान्ने प्रवृतीले स्थान जमाएको छ । फलस्वरुप नयाँ नेपालमा म शब्दको उपयोग ब्यवहारिक र लिखित रुपमै सदुपयोग होस ता कि विदेशी प्रभुहरुको आँखा नलागोस ।